Semalt Inotaura Mashoko Akakosha Pamusoro peInternet Kunyengera Uye Nzira Dzokuzvidzivirira Pariri.
Kutengeswa (kutakura) makambani anoziva vanokanganisa vachishandisa unhu hwavo munzangamhizha uye e-commerce website kuti dzitsause zviuru zvevashambadzi vanobatanidza mawebsite aya.
Izvi ndizvo zvinowanzoshanda. Iwe unofamba ne-e-commerce website, onachero chipi zvacho chaunoda kutenga, chengeta uye upedze kubhadhara. Zvadaro, iwe unowana zvakare email inokukumbira kuti ubhadhara kutumira mberiinotumirwa - zvonenje nokian. Pane kubata kunyange: iyo email haisi yekambani yepamutemo yekutakura, uye mari yauri kukumbirwa kubhadhara ichaitakwete kubhadharwa uye hazvizobatsiri kuronga hurongwa hwako. Zvimwe zvinokanganisa sejotori scam, kwaunoudzwa kuti wakakunda sweepstake,lotto kana mubairo wemakwikwi hamuna kutora chikamu munzvimbo yekutanga.
Makambani ekubhadhara haatauri wechitatu-party (escrow) services. Sezvo zvakadaro, usadaroinotaurira ku wiring chikwereti kune ani zvake. Iwe unogona kunge uri kufamba mune imwe sangano reInternet.
Ross Barber, the Semalt Mutengi Wakabudirira Muteereri, anokukurudzira kuti ufungisise mashoko anotevera. Kunyange kana pane nhamba yekutumira inopiwa kukutumirwa, usanyengerwa. Chigadzirwa chacho chinogona kuiswa mubhodhi rako rekutengesa, asi zvingasava riri mumaoko emafambisikambani. Kana iwe uri mune kusava nechokwadi, taura nekambani yekutumira kana kushanyira webhusaiti yavo yepamutemo. Izvi zvichaona kuti boka rekutumiraane chibereko mune zvayo..Ipapo iwe unogona kuzorora nehuvimbiso yako zvigaro zvichasvika kwauri.
Makambani ekutumira / kutengesa anoita zvose musimba ravo kudzivirira inonzi scams online.Basa ravo rekutengeserana, dare redzimhosva uye rekuchengetedza rinoshanda pamwe chete kuti vone kuti iwe (muchengeti) unoziva nezvezvese zvinonyadzisa uye seivadzivise ivo. Uyezve, vanobatsirana nemasangano enyika dzakadai seBay, Amazon, Western Union uye kunyange hurumende kuti dzirambe dziripozvinhu zvinomhanya zvakanaka.
Chii chaunofanira kuita kana iwe uchitambudzwa?
Kuti zviremera zvakakodzera zvivhare pasi webhusaiti yehutsotsi, ivokuvimba newe kuti ubike chero mabasa anoshungurudza. Tungamira email kune kero yakapiwa. Cherechedza kuti haugoni kuwana chero zivo kana iwetumira email. Icho chinogonawo kuva chirevo chakanaka chekuzivisa izvozvi kuvakuru vemo vanoenda kunzvimbo, mapurisa. Pakave nemapoka mashoma, izvozvakaguma nekusungwa. Uye nevarume vakaipa mushure mejeri, unogona kunakidzwa nekushambadzira kwekutenga kwepaIndaneti.
Sezvakataurwa, pane chikonzero chekuzivisa zvose zviitiko zvekunyengera kwepakombiyuta kunyanyaiyo inotaura nezvekambani dzekutakura. Nevamwe vanhu vakaziva nezvekutyisidzira uku, madambudziko aya achava chokwadi chekare. Heanoizvimwe zviyero zvinoshandiswa kupedza rusununguko rwepakombiyuta:
> misangano pakati pevashandisi vakasiyana-siyana vachitsvaka kugadzirisa nyaya iyi
> kubudisa mabhuku ezvinyorwa nguva dzose
> mirayiridzo pamusoro pokuti nzira yekuendesa kwechinhu inoshanda sei. Nenzira iyi, unogonainotaura zvakajeka nezvekutsvaga.
Mukupedzisa, iva nechokwadi chokuti iwe unoudza shamwari yezvaunodzidza kuitira kuti ivowo vaitekwete kuve chibharo.